Rayson | ama-twin umatilasi kanye nebhokisi le-walmart yasentwasahlobo
Yasungulwa eminyakeni edlule, uRayson ungumkhiqizi ochwepheshile futhi ungumnikezeli onekhono eliqinile ekukhiqizeni, ekuklameni, naku-R&D. umatilasi we-twin kanye ne-box spring walmart U-Rayson uneqembu lochwepheshe besevisi abanomthwalo wemfanelo wokuphendula imibuzo ephakanyiswe amakhasimende nge-inthanethi noma ngocingo, ukulandelela isimo sokuhamba, nokusiza amakhasimende ukuxazulula noma iyiphi inkinga. Ukuthi ungathanda ukuthola ulwazi olwengeziwe ngokuthi yini, ngani futhi senzani, zama umkhiqizo wethu omusha - ama-twin mattress kanye ne-box spring walmart , noma ungathanda ukubambisana, singathanda ukuzwa kuwe. Lo mkhiqizo uzoba ithonya eliphawulekayo ekuzethembeni kwabantu nasezingeni lokuzethemba. Kwenza abantu abalolongekile ngokwengqondo ukuthi bagxile ngokuphelele kulokho okufanele bakwenze.